Radio Shabeelle: Weriyihii 14-aad Oo Lagaga Dilay Soomaaliya | Berberatoday.com
Radio Shabeelle: Weriyihii 14-aad Oo Lagaga Dilay Soomaaliya
Muqdisho(Berberatoday.com)-Kooxo ku hubeysan bastoollado, ayaa maqribnimadii Shalay Magaalada Muqdisho ku dilay wariye ka tirsanaa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho.
Wariyaha la dilay oo Magaciisa la odhan jiray Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji ayaa kamid ahaa wariyaasha Idaacadda Shabeele, waxaana dilkiisa ka dambeeyay rag bastoolado ku hubeysan.
Dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in wariyaha lagu dilay agagaarka Jiiro Garoob oo ka tirsan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.Lama oga sababta dilka wariyaha ka dambeysa, balse kooxaha dilka geystay ayaa ka baxday goobta falka uu ka dhacay.
Idaacadda Shabeele oo kamid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dilay 14 Wariye oo ka mid ah 58 Wariye oo dalka Somaliya lagu Dilay 2006 ilaa 2016ka.
Wariye Cabdicasiis Maxamed Cali waxaa uu aad ugu shaqeyn jiray Dadka Danyarta ee aan Codka lahayn isagoo inta badan warbixinada ka sameyn jiray Xerooyinka barakacayaasha iyo Cisbitaalada la jiifiyo Bukaanada.
Xoghayaha Guud ee Ururka Saxaafada Somaliya Maxamed Macalimuu ayaa Tacsi u diray eheladii iyo Qaraabadii uu ka baxay Wariye Cabdicasiis Maxamed Cali isagoo Suxufiyiinta Somaliya ugu Baaqay inaanay joojin wararka ay bulshada u gudbinayaan islamarkaa aanay dheg u dhigin Kooxaha cabsida ku abuuraya Wariyayaasha Somaliya.